I-T4 i-Slips kunye nezinye i-Slips zeNgeniso zerhafu ze-Canada
IiSlips zeRhafu zeNgeniso zeMali zeCanada
Kuphela ekupheleni kukaFebhuwari ngonyaka ngamnye, abaqeshi, abahlawuli kunye nabalawuli bathumela ulwazi lwerhafu yengeniso ukuba baxelele abahlawuli berhafu baseCanada, kunye ne- Canada Agency Revenue Agency (i-CRA) , ingakanani imali engenayo kunye neenzuzo abazifumana kulo nyaka werhafu wangaphambili, kwaye irhafu yengeniso yachithwa. Ukuba awufumani i-slip yolwazi, kufuneka ucele umqeshi wakho okanye umniki we-slip ngenkopi yesibili. Sebenzisa ezi zihlomelo zerhafu ekulungiseleleni nasekufakeni i-tax revenue yakho yaseKhanada enokubuyisela kwaye ufake iikopi ngokubuya kweerhafu.
Ezi ziqhelekileyo i-T4 kunye nolunye ulwazi lwerhafu luyahluma.
I-T4 - Ingxelo yomvuzo ohlawulwayo
Imifanekiso yezithombe / iPhotodisc / Getty Izithombe
I-T4 ikhutshwa ngabaqeshi ukukuxelela kunye ne-CRA ukuba ingeniso yengqesho ohlawulwa ngayo ngexesha lonyaka werhafu kunye nenani lentlawulo yengeniso echithwe. Kanye nomvuzo, ingeniso yengqesho ingaba iibhonasi, ukuhlawula iholide, iingcebiso, iintlawulo, ii-commissions, izibonelelo ezihlawulwayo, ixabiso leenzuzo ezihlawulisiweyo kunye nentlawulo endaweni yesaziso. Kaninzi "
I-T4A - Ingxelo yePensheni, umhlala-phantsi, i-Annuity, kunye nezinye iNgeniso
I-T4As ikhutshwa ngabaqeshi, i-trustees, abaphathi bezindlu okanye abacwangcisi, abalawuli bempesheni okanye abalawuli beenkampani. Zisetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zengeniso, kubandakanywa impesheni kunye neengeniso zengeniso-mali, ii-commissions ezizenzekelayo, i-RESP iintlawulo zengeniso, i-benefit benefits, kunye nezibonelelo zophando. Kaninzi "
I-T4A (i-OAS) - Ingxelo yeKhuseleko lokuNdala
I-T4A (i-OAS) iifayile zerhafu zikhutshwa yiNkonzo yeCanada kwaye zibika malunga nengeniso ye- Old Age Security eyayifumene kunyaka werhafu kunye nenani lentlawulo yengeniso echithwe. Kaninzi "
I-T4A (P) - Ingxelo yeCanada yeProgram Pension Benefits
I-T4A (P) iiflethi zikhutshwa yiNkonzo yeCanada. Bakuxelela kunye ne-CRA ukuba ingeniso engakanani efunyenwe yiCanada Pension Plan (CPP) kunyaka werhafu kunye nenani lentlawulo yengeniso echithwe. Iintlawulo ze-CPP ziquka iintlawulo zomhlala-phantsi, iinzuzo zokusinda, inzuzo yabantwana kunye nezibonelelo zokufa. Kaninzi "
I-T4E - Ingxelo ye-Intshurensi yengqesho kunye nezinye iiNzuzo
Ekhutshwe yiNkonzo yeCanada, i- T4E yentlawulo yerhafu ichaza inani elipheleleyo lemali ye-Inzuzo Yomshuwalense (EI) ehlawulwa kuwe kunyaka werhafu odlulileyo, irhafu yengeniso echithwe kunye nayiphi na imali ehlawulwa kwi-overpayment. Kaninzi "
I-T4RIF - Ingxelo yeNgeniso evela kwiNgxowa-mali yeNgeniso yoMhlala-phantsi
I-T4RIF yile ngcaciso yerhafu isetyenziswe kwaye ikhutshwe ngamaziko emali. Bakuxelela kunye ne-CRA imali endifumene ngayo kwi-RRIF yakho yonyaka werhafu kunye nemali yentlawulo echithwe. Kaninzi "
I-T4RSP - Ingxelo yeRRSP yeNgeniso
I-T4RSPs ikhutshwa ngamaziko emali. Bika ingxelo ngemali oye wasuka kuyo okanye wayifumana ngaphandle kwe-RRSP yakho yonyaka werhafu kunye nokuba ityala lithatyathwe kangakanani. Kaninzi "
I-T3 - Ingxelo yeSabelo seNkxaso yeNkxaso kunye neNkcazo
I-T3 iyakulungiswa kwaye ikhutshwe ngabalawuli bezemali kunye nabaphathiswa kunye nokubika ngengeniso efunyenwe kwimali kunye kunye nethemba lonyaka werhafu onikwe. Kaninzi "
I-T5 - Ingxelo yeNgeniso yeMali-mali
Ii-T5 zolwazi lwezorhafu ezilungiselelwe kwaye zinikezelwe yimibutho ehlawula inzala, izabelo okanye izibonelelo. Ingeniso yezoTyalo ezibandakanyiweyo kwiit5 zerhafu ziquka igalelo ezininzi, iintlawulo, kunye nomdla kwi-akhawunti yebhanki, i-akhawunti kunye nabathengisi-mali okanye abadayisi, imigaqo-inshorensi, i-annuity, kunye nezibophelelo. Kaninzi "
Kuphi Ukufumana Uncedo Ngeentlawulo Zakho Zenkonzo zeCanada
IPlankton - Amaninzi amaninzi aseLwandle
Yiyiphi ilayisenisi yobugcisa?
Indlela yokujonga imeko yeNgxaki yokufuduka kunye ne-USCIS
Zivelaphi Iintsukisi Zesiqhamo?
Jongana neBhola: Kuthetha ukuthini kwaye kutheni ufuna ukuyazi
10 Amanqaku malunga nolwandle lwase-Otters
Indlela yokuthengisa i-Painting nguMculi oLwazi
I-Violent Femmes Iingoma zee-80s
Umxholo (lexical) igama